Arrimaha Macmiilaha ee Fiktooriya - Consumer Affairs Victoria
Consumer Affairs Victoria »Resources and education »Other languages »Arrimaha Macmiilaha ee Fiktooriya
Arrimaha Macmiilaha ee Fiktooriya
Consumer Affairs Victoria waa hay'ada sharciga u samaysa arrimaha macmiilaha. Ujeedadayadu waa in la caawimo dadka reer Fiktooriya inay ahadaan masuul iyo macmiile warqab ku ganacsanaya.
Si taas loo sameeyo waa in:
Dib loo eegaa talana la siiyaa xukuumada xagga sharciga macmiilaha iyo baaqa ganacsiga Lala taliyo waxna la baro macaamiisha, kiraystayaasha, ganacsatada iyo kuwa leh guryaha la kiraysto xagga xuquuqdooda, masuuliyadooda iyo wixii isbedela oo ku yimaada sharciga La diiwaangeliyo lana siiyo shati ganacsiyada iyo hawlaha socda La heshiisiiyo khilaafaadka u dhexeeya macaamiisha iyo ganacsatada, iyo kuwa guryaha ijaara iyo kuwa laga ijaaro La meelmariyo lana xaqiijiyo raacista qaanuunka macmiilaha.
Waxaanu ka bixinaa talo iyo macluumaad madaxbanaan oo ku saabsan:
Dhisida iyo cusboonaysiinta Bixinta laysanka ama shatiga ganacsiga iyo sharciga Magacyada ganacsiga Gadashada iyo iibinta hantida Iskaashiga Lacag ururinta Jimciyadaha la-midoobay Wada shaqaynta xadadan Maaraynta deynta Baabuurta Cidda leh shirkadaha Amaanka badeecada Ijaarida Goobaha ama deegaanka dadka shaqada ka fadhiisanaya Khaainimada Dukaamaysiga iyo ganacsiga.
Wac 131 450 oo afkaaga ku dheh Somaali sida Ingiriiska loogu yiraahdo. Dabadeedna weydii mutarjumku inuu waco 1300 55 81 81.
Iibka albaabka la keeno Ijaarashada guri Iibsashada gaari Ka fogaanta dhagarta Khaaimiinta Safraya Heshiisyada telefoonada gacanta Xuquuqdaada ka adeegsiga suuqa
Isticmaalida myCAV ururada sharciyeysan (Word, 3.6MB)